Commentaires - Ny famoloana. - Ambohibary, vohitra soa !
Ny famoloana dia toerana iray manana ny lanjany, tsy afaka misaraka amin'ny fararano. Natao hanaovana vary izy amin'ny ankapobeny : hikapohana ny fehezam-bary, hametrahana ny atonta, hanahazana ny vary akotry. Izy io dia mirefy manodidina ny 100 m mivadi-droa eo, ka misy 2 karazana ny famoloana : Ny famoloana voalalotra tany mena mifangaro tain'omby,Ny famoloana vita lalotra simenitra. Amin'ny akapobeny dia misy vato roa, manana haavo eo amin'ny 50 sm, ary manana velarana sahabo...